Singal Oo Ku Guulaystay Koobka Qaramada Afrika – Heemaal News Network
Singal Oo Ku Guulaystay Koobka Qaramada Afrika
Xulka Senegal ayaa markii u horreysay ku guuleystay tartanka koobka qaramada Afrika iyaga oo rikoodheyaal ku garaacay waddanka shanta jeer ku guuleystay ee Masar oo ay rikoodheyaal 4-2 ah ku karbaasheen.
Senegal oo aan waligeed hore ugu soo guuleysanin tartartankan ayaa ka soo kabatay waji-gabaxii tartankii hore kasoo gaadhay ee finalka ay Algeria koobka kaga qaadday.
Sadio Mane ayaa noqday halyeyga xulkiisa ee dhaliyey rikoodhaha ay koobka ku qaadeen in kasta oo uu bilowgii ciyaarta lumiyey rikoodhe.
Ciyaar ay inteeda badan daadihinayeen Senegal ayay ka faa’iidaysan waayeen fursado badan oo ciyaarta gudaheeda ah, halka Masar ay kubbadaheedu ku lumayeen inta aanay soo gelin xerada ganaaxa oo ay adkayd in ay xataa soo gaadhaan.
Xulka qaranka Senegal ayaa ciyaarta ku bilowday si xooggan iyaga oo gacanta ku dhigay khadka dhexe, garbahana weerarkana ay sida daadka uga soo gelayeen oo Sadio Mane iyo Ismaila Sarr oo ay awoodi waayeen difaaca Masar in ay xakameeyaan.
Mohamed Salah oo ay kaamirooyinku si gaar ah u hayeen ayaa daqiiqadihii ugu horreeyey ay ku adkayd in uu kubadda helo, halka Sadio Mane uu ku guuleystay in loo dhigo laad xor ah.
Senegal ayaa loo dhigay rikoodhe laga soo daawaday VAR daqiiqaddii afraad kaddib markii uu Mohamed Abdelmonem qalad ku galay Saliou Ciss, hase yeeshee Sadio Mane oo u dhiibay goolhaye Mohamed Abougabal.
Waqtigii asalka ahaa ee ciyaarta iyo soddon daqiiqadood oo dheeraad ahaa oo lagu daray ayaa intuba kusoo dhamaaday barbarro goolal la’aan ah, waxaana loo dhigay rikoodheyaal ay guushu ku raacday Senegal.
Midowga Afrika Oo Magacaabay Bedelka Simon-kii Dawladu ka Ceyrisay Somaliya
Real Madrid Oo Garaacday Barcelona, Messi Oo Wajigabax Kala baxay Garoonka
Zinedine Zidane Ka hadlay Mustaqbalka Kylian, Messi, Iyo Ramos
Chelsea Oo Ku Kaliyeysatay Kaalinta Afaraad Ee Premier league
Heemaal April 25, 2021
“Hanjabadan Mucaaridka Waxay ku Denbayn In La Tago Buurtii Gacan Libaax” Wasiir C/laahi Abokar
“Ninka Leh Caruurta Xabada Isku Dhiga Waxaan Leeyahay” Wasiir Saajin Oo U Jawaabay Ciro